Shiinaha SPC Dabaqa SM-055 Soo-saar iyo Warshad | Dheeraad ah
Sababtoo ah qaabka casriga ah ee Mareykanka, qaabka Shiinaha ee cusub ayaa aad ugu habboon dabaqa alwaax casaan bunni leh, qolka jiifka wuxuu umuuqdaa mid qurux badan. Dabaqa alwaax ee bunni casaanka ah sidoo kale wuu ka qurux badnaan karaa guud ahaan, maxaa yeelay tani sidoo kale waa mid ku habboon, u dhigma hawo yar, alaab dejisa, waxay qofka ka dhigi kartaa inuu dareemo qolka jiifka ee gurigu inuu yahay mid aad u qurux badan. Midabka ka sokoow, habka looxa sagxada sagxadu sidoo kale waa bar iftiin weyn, sida laamiga I-qaabeeya iyo saxaabada saaxiibtinimadu waa laba habab oo caam ah oo caadi ah, tikniyoolajiyadda wax lagu farsameynayaa way fududaan doontaa. Qaababka lafaha kalluunka iyo qaabka loo jeexayo ayaa ka sii dhib badnaan doona. In kasta oo ay yihiin kuwo soo jiidasho leh, isticmaalka ayaa ka sarreeya. Waxaa lagugula talinayaa in aan ku doorano habka wadada laamiga sida ku xusan miisaaniyadayada qarashkeena
Goobta dalabkayagu waa mid ballaadhan, wasakhda u adkaysata, aashitada iyo caabbinta alkali waa wanaagsan tahay, dayactir la'aan.
(1) Xidho iska caabbinta iyo isku halaynta: dusha sare ee dabaqa la xoojiyay waa lakabka u adkaysta dharka, kaas oo ka kooban siman aluminium oksaydh ah oo loo qaybiyey, kaas oo lagu gaari karo xoog sare, waxaana had iyo jeer lagu xoqaa biro adag oo fiiqan sida furaha, oo halkaas had iyo jeer waa calaamado aad u hooseeya. Iska caabinta wasakheynta deegaanka, iska caabbinta daxalka, xoogga cadaadiska iyo iska caabinta saameynta dabaqa la xoojiyay ayaa ka wanaagsan noocyada kale ee sagxadda alwaax.
(2) Qiimaha-ku-oolku waa mid sarreeya: lakabka dharka u adkaysta, lakabka naqshadeynta qurxinta iyo lakabkiisa isku dheelitirka ee dabaqa la xoojiyay waxaa daabacay baakadaha aadanaha. Waxyaabaha salka ku haya waxaa laga sameeyey maaddooyinka kaynta si dhakhso leh u koraya. Qiimaha waa ka raqiisan yahay kan alwaaxa dhabta ah, waana la warshadeyn karaa.
Hore: SPC Dabaqa SM-028
Xiga: SPC Dabaqa SM-056